Fanentanana haverina amin'ny laoniny, ahoana ny fomba handaminana iray hahomby? | Green Renewable
Portillo Alemanina | | Trano maintso, Tontolo_iainana
Azontsika rehetra atao ny mandamina a fanentanana fanodinana eto amin'ny tanànantsika, satria mahazatra be ny tsy fisian'ny programa momba ny fisarahana, fanangonana ary fanodinana ireo fako rehetra aterak'izany.
Izany no antony ahafahan'ny sekoly, ONG, klioba, orinasa ary andrim-panjakana hafa handamina fanentanana hanodinana izay hampiroborobo ny fanodinana ny fako isan-karazany. Raha te handamina iray ianao dia ireto ny toro lalana manaraka.
1 Torohevitra momba ny fanentanana fanodinana fahombiazana
1.1 Ahoana no ahafahantsika manao fanentanana fanodinana any am-pianarana?
2 Ahoana ny fomba handrisihana ny olona hamerina?
2.1 Sehatra inona avy no mampiroborobo ny fanentanana ara-tsosialy toy ny fanodinana?
3 Ahoana no tokony hamerenana azy?
4 Inona no azontsika atao hanatsarana ny fanodinana fako?
5 Ahoana ny fomba fananganana fanentanana fanangonana fako?
Torohevitra momba ny fanentanana fanodinana fahombiazana
Mba hahombiazana ny fanentanana fanodinanany tondrozotra sasany dia tsy maintsy raisina toy ny:
Ny fampielezan-kevitra amin'ny famerenana famerenana dia manana fotoana natomboka sy famaranana, raha tsy navadika ho programa. Misy daty fanombohana sy daty famaranana.
Tsara fifandraisana Amin'ny faritra kasaina hanaovana fampielezan-kevitra dia tsy maintsy ampiasaina ny karazana haino aman-jery isan-karazany, toy ny afisy, dokam-barotra, tambajotra sosialy, isan-trano, sns.
Manomeza fanazavana mazava rehefa manaparitaka ny fampielezan-kevitra mba hahafantaran'ny tsirairay ny hafatra sy ny fomba hanatanterahana izany.
Alohan'ny hanombohana ny fampielezan-kevitra dia mila mitantana izay hatao amin'ireo fako na fitaovana angonina ianao.
Ampidiro ny sehatra sosialy sy fiaraha-monina rehetra hahombiazana tokoa.
Omeo safidy sy endrika fandraisana anjaran'ny olom-pirenena mba hahafahan'ny olona maro kokoa miara-miasa.
Rehefa vita ny fampielezan-kevitra dia tsy maintsy taterina amin'ny haino aman-jery samihafa ny valiny mba hahafantaran'ireo nandray anjara ny niafarany sy ny zava-bita.
Azo averina indray ny fampielezan-kevitra amin'ny laoniny fa mety ny mamorona sy mifampiresaka amin'ny fomba hafa.
Ny fanentanana fanodinana dia mety ho eo an-toerana, isam-paritra ary koa nasionaly. Azon'izy ireo atao ny mifantoka amin'ny vokatra na fitaovana be dia be izay fako fa tsy tokony ariana satria hamokatra fandotoana ankoatry ny fandaniam-bola.
fanodinana tsy maintsy lasa fomba lehibe hitantanana ny fako, isaky ny tanàna, tanàna sy firenena dia tokony hampiroboroboana ny fanodinana entana. Amin'izany fomba izany no hiarovanao ny tontolo iainana.
Fanentanana tsara fanodinana tokony hanaitra ny sainy sy hampahafantatra momba ny filana fanodinana ary manome fampahalalana momba ny fanaovana azy.
Efa nandamina fanentanana fanodinana entana ve ianao? Inona avy ireo dingana nataonao tamin'ny fandaminana azy?
Raha te-ho feno dia aza adino ny manazava ny dikan'ireo loko amin'ny fitoeram-bokatra:
Fako fanodinana, loko ary dikany
Ahoana no ahafahantsika manao fanentanana fanodinana any am-pianarana?
Safidy lehibe indrindra ny famporisihana ny fanodinana indray hatramin'ny fahazazany mba hahafahan'izy ireo mampiditra ireo fahazarana ireo amin'ny fiainany andavanandro. Raha mampianatra ny ankizy hamerina simba hatramin'ny fahazazany isika dia asaintsika manohy manao azy ho azy amin'ny ho avy izy ireo. Andao hojerentsika hoe inona ny lakile mba hahafahan'ny fampielezan-kevitra fanodinana any am-pianarana mandeha tsara:
Ampianaro ny 3R sy ny maha-zava-dehibe azy ireo
Atombohy amin'ny rafitra fanodinana any an-dakilasy
Mampianatra sy manendry kaontenera hitahiry ireo fitaovana ampiasaina amin'ny asa-tanana
Ampiasao indray ireo entana rehetra azo ampiasaina amin'ny toeran-kafa
Manaova hetsika atao mba hahafahan'ny ankizy mampiasa zavatra namboarina
Azavao ny maha-zava-dehibe ny fanasana tanana aorian'ny fitaovana fanodinana
Mandamina fitsangatsanganana an-toerana an'ireo zavamaniry fanodinana ao an-toerana
Ahoana ny fomba handrisihana ny olona hamerina?
Mba handrisihana ny olona hanodina, dia mila mandrisika karazana loka vitsivitsy ianao. Azonao atao ny misafidy ny hamorona hetsika fanentanana ho famporisihana ny kolontsaina tsy mampiasa taratasy na fonosana raha tsy ilaina izany. Mba hampisarahana tsara ny fako dia zava-dehibe ny fananana fitoeram-bokatra fanodinam-bidy ampy amin'izany.
Azonao atao ny manome kilalao, akanjo ary boky izay tsy ilaina ho an'ny olon-kafa hampiasana azy intsony. Ny zavatra tsara indrindra dia ny mampita ireo hetsika rehetra ireo ary mandrisika hahatratra karazana tanjona mba hampihenana ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ireo hetsika isan'andro.
Sehatra inona avy no mampiroborobo ny fanentanana ara-tsosialy toy ny fanodinana?
Mba hahazoana olona maro hanodina Mahaliana foana ny mifandray amin'ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, ivon-toerana fanabeazana, na koa foibe fanatanjahan-tena izay ireo sehatra afaka manome fanampiana anao indrindra, angamba amin'ny fanomezana efitrano anao hanome fihaonambe ary amin'izany hanentanana ny olona, ​​na amin'ny fametrahana afisy, ohatra.
Ahoana no tokony hamerenana azy?
Miverina araka ny tokony ho izy zava-dehibe ny fahalalana tsara ny fako, ny karazany ary ny toerana tokony hametrahana azy. Ny fako mamokatra be ao an-tranontsika isan'andro dia ny fonosana, ny plastika, ny taratasy, ny baoritra ary ny vera. Izy rehetra dia tsy maintsy sarahina amin'ny fako biolojika ary apetraka ao anaty fitoerany avy.
Aorian'izay dia tsy maintsy fantarintsika izay fako mampidi-doza na misy poizina ary aiza no hametrahana azy. Ho an'ity dia misy kaontenera manokana, ireo ho an'ny batery, solika efa niasa ary teboka madio any an-tanàna.
Inona no azontsika atao hanatsarana ny fanodinana fako?
Mba hanatsarana ny fanodinana fako, ny tena zava-dehibe dia ny fampiofanana tsara sy ny fahafantarana ny karazany karazana kaontenera misy izany. Afaka manao izany koa isika angataho ny filankevitra eo an-toerana hanatsara ny rafitra fako, manamora ny fametrahana sy ny fanangonana azy. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fampihenana ny fihinanana hanatsarana ny fahombiazana sy ny fampiasana akora manta.
Ahoana ny fomba fananganana fanentanana fanangonana fako?
Ny dingana hanarahana dia hitovy kokoa na mitovy amin'ny hoe te-hamorona fanodinana izy; izany hoe mila mametraka ireo kaontenera mifanaraka amin'izany isika ary manazava ny alehan'ny fako tsirairay. Inona koa, zava-dehibe ny fanentanana, na amin'ny fampisehoana horonan-tsary sy / na sarin'ny fandotoana misy eto ambonin'ny planeta, sy ny vokatr'izany eo amin'ny natiora sy amintsika.
Tena mahaliana indrindra ny manomboka any amin'ny akanin-jaza na sekolyFantatra fa rehefa mianatra kely hikarakara ny tontolo iainana ny ankizy dia mazoto manohy manao izany rehefa olon-dehibe.
Tsikelikely, samy mametraka ny voam-pasiny avy isika, dia hanana tany madio kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » Fanentanana haverina
Misaotra anao Adriana, mahafinaritra be ny vaovao, ny hikarohako an'ity lohahevitra ity ao amin'ny google satria tiako ho fantatry ny vahoaka Costa Rica (ny fireneko) ny fanaovana an'io, ary raha tianao dia katsaho ny «rio virilla costa rica », Ary hivoaka vaovao tsy mahafinaritra momba ny fako atsipy any anaty renirano izy ireo.
Sofia dia hoy izy:
Tena tiako ny voalaza ao satria afaka mamerina miverina izahay
Mamaly an'i sofia
Placeholder sary Castillo dia hoy izy:
Super! Io no fototry ny drafitra fampielezan-kevitra amin'ny orinasa iasako.
Valiny tamin'i Gabriel Castillo
Ahoana ny fomba hampiakarana ny harena ara-tontolo iainana?
Andrea yulieth lopez ady miafina dia hoy izy:
Nanampy betsaka ahy ity fampahalalana ity adrian
Valiny tamin'i Andrea yulieth lopez ady miafina
Salama, te hahazo fanohanana sy fampahalalana aho hamerenana ireo fako amin'ny asako. Mampiasa plastika be dia be izahay ary te hanampy kely ny planeta.
Robeto dia hoy izy:
Salama tsara ry andro; Ao anatin'ny faritra misy anay dia mikarakara fisarahana fako misy teboka maitso izahay.
Namboarinay, izy ireo dia hapetraka amin'ny toerana tokana, (baterin'ny kitapo 15) dia miombon-kevitra amin'ny orinasa hanaisotra ny fako izahay, hametraka fakan-tsary fakan-tsary ary hanitsy ilay tsy mety.
Torohevitra, karazana fampahalalana inona no tokony omentsika ny mpifanila vodirindrina amintsika, mba hahafantarany izay hametrahana ny fako sns.
Misaotra betsaka amin'ny fotoananao.
Mamaly an'i Robeto